कोसंग घरजम गर्दैछन गायक राजेशपायल राई ? | kollywood Update
कोसंग घरजम गर्दैछन गायक राजेशपायल राई ?
पौष ५ , कलिउड अपडेट ।
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक राजेशपायल राईले जोडी अंक आउने वर्षमा आफ्नो विहे पक्का हुने बताएका छन् । उनी यहि वर्ष घरजम जोड्ने सुरुमा थिए तर विजोडि वर्ष भएकै कारण यो वर्ष उनको घरजम बसाल्न पाएनन् । ‘राजेशपायलको बिहे पक्का हो’ राई इज किङ गायक राईले भने,‘यो ०७१ बिजोडी वर्ष भएकाले मात्रै ।’ तर आफूले कोसंग जोडि बाध्ने थाहा नभएको राई बताउँछन् ।
‘जोडी बाँध्नेजस्तो कुरा सामान्य होइन’ उनी भन्छन, ‘साइत त हेर्नै पर्यो नि ?’ गत असारमा अभिनेता राजेश हमालले जोडी बाँधेपछि राजेशपायलले पनि जोडी बाँध्न रहर गर्न थालेका हुन् । उनलाई जोडी बाँध्ने रहर छ भन्ने कुरा बेलाबेला फेसबुकमा अपडेट भएका स्टाटसले पनि बताउँछ ।
केही समयअघि राजेशपायलले आफ्नो फेसबुक वालमा राजेश हमाल र उनकी पत्नी मधुको फोटो अपलोड गर्दै लेखेका थिए,‘मितज्यूको भयो, अब मेरो पालो ।’ तर, रहर गरेरमात्र त हुँदैन । समय पनि हुनप¥यो । गायनमै व्यस्तताका कारण ‘आइलभ य’ भन्ने युवतीहरुलाई ‘आई लभ यु टु’ समेत फर्काउन समय नभएको राजेशपायल राईको २०७२ सालमा बिहे पक्का होला त ?
News – Nepalpati